Istanbul Tehran Break Break 3 Onye Kachasị Ego Ego | RayHaber | raillynews
HomeỤWAAsia98 Iran3zọ Istanbul XNUMX Kachasị ewu ewu maka Tehran
3zọ Istanbul XNUMX Kachasị ewu ewu maka Tehran
09 / 01 / 2020 98 Iran, Asia, ỤWA, ụgbọ okporo ígwè, General, Ụgbọelu, Ụzọ Awara Awara, Ụgbọ okporo ígwè Tire, Isi akụkọ, Turkey
Mostzọ kachasị ewu ewu iji gaa n'etiti istanbul na tehran
Mgbe ị na-eme njem na Middle East, ị ga-achọ igha obodo ndị gbara ya gburugburu na Istanbul wee nọrọ ụbọchị ole na ole. Turkey si uru a nleta bụ na Istanbul bụ naanị obodo. E nwere ọtụtụ ihe na-hụrụ gburugburu Turkey, ma ọtụtụ n'ime ndị njem na-amapụ ndị ọtụtụ n'ime ha. Agbanyeghị, ị ga - achọ ime ezumike ogologo oge, ma eleghị anya ị na - eme atụmatụ ịga obodo abụọ ma ọ bụ atọ ma ọ bụ ọbụna mba n'otu oge. Istanbul na Tehran, Iran na Turkey bụ ewu ewu na ebe maka njem. E nwere ụzọ atọ kachasị ewu ewu iji ruo Tehran site na Istanbul.
Comfortablezọ kachasị dị mma ma bụrụkwa ụzọ kachasị ọnụ iji ruo Tehran site na Istanbul bụ ụgbọ elu. Ndị isi ụgbọ elu Turkey na-aga kpọmkwem. Ọnụ ahịa tiketi na-amalite site na $ 160 maka njem okirikiri, dabere na otu oge. Flightgbọ elu ahụ na-ewe ihe dịka awa 3-4.
Transportationgbọ njem ọzọ ị nwere ike iji ruo Tehran bụ bọs. O bu ihe nwute, na enweghi ugbo ala nke si na Istanbul ebido, yabụ ị ga-ebu ụzọ gaa Ankara wee gaa n'isi obodo Iran wee chọọ ụlọ ọrụ bọs na-arụ ebe ahụ. Ọnụ ego ahụ ruru $ 100 n'otu ụzọ. Njem a na-ewe ihe karịrị awa iri atọ ma nwee ntụsara ahụ kacha ala n'etiti ụzọ atọ dị iche iche enyere.
Nwere ike ị ga-esi ụgbọ okporo ụdọ gaa na Tehran site na Istanbul. Ndị njem na-achọta ụgbọ njem kachasị ọnụ na nke ga-adaba adaba. Njem ndị dị otú ahụ nwere ike na-eri oge dị anya ma ha na-akwụghachi ụgwọ. E nwere ọtụtụ ihe mere ndị mmadụ ji ahọrọ karịa ụgbọ oloko na ụzọ ndị ọzọ nke ụgbọ njem mgbe ha na-eme njem. Otu n’ime ndị a bụ nnukwu oche a gbanwere n’ime akwa n’abali na nkasi obi n’oge njem dị anya ị nwere ike gbasaa kama ị banye n’ime oche ụgbọ elu akụ na ụba. Transasia Express aha e nyere na Turkey na Ankara nwere a ejikọta ụzọ tinyere Lake Van na Tehran. Njem a nwere ahụmịhe atọ dị iche iche. Ndị a gụnyere njem ụgbọ oloko abụọ na otu njem ụgbọ mmiri. Na mgbakwunye, a na-enye ụgbọ njem ụgbọ elu si Istanbul gaa Ankara site na ụgbọ elu na-agba ọsọ ọsọ. Ndị njem na-ahọrọ njem ụgbọ oloko na Transasia Express na ekele maka ahụmịhe ha. Ndị njem na-agagharị n'ụgbọ ahụ zuru oke maka ikiri ihe ịtụnanya, echiche dị mma na mmiri nke Lake Van, na-ezute ndị mmadụ nwere mmasị, ndị obodo nwere enyi na ndị njem nwere ahụike, yana ịnụ ụtọ nnwere onwe na ịdị jụụ nke okike. Lelee tiketi dị ebe a (na Transasiatra) wee kwadebe maka njem ọhụụ.
Obodo ski kachasị ewu ewu na America
'Echere' Na-emeghe ihe ngosi ihe omumu nke Uludağ
Iran weghaara Istanbul dị ka ihe nlereanya na ụzọ ụzọ Tehran
Onu ogugu nde ijeri euro iri na ise na Tehran na Tabriz metro oru na German…
Map nke Tehran Metro
72 kwa awa na ụgbọ oloko ...
Tehran na-atụ anya ihe ndị si Yerevan maka okporo ụzọ Iran-Armenia
Tehran - Ụlọ ọrụ electrification nke Mashhad ga-akwado China
Ụlọ ọrụ China na-egosi Tehran-Masat Electrification Agreement
İsa Apaydın Na-aga nzukọ UIC-RAME na Tehran
TAHRAN- Ụgbọ okporo ígwè Ankara si Muş.
Tehran dị njikere maka ụgbọ okporo ígwè na Armenia na ichere maka ego
Njem Istanbul Tehran
Njikọ ụgbọ ala na-esite na Istanbul Tehran
Usoro ụgbọ oloko Istanbul Tehran
Ihu ụgbọ elu nke Istanbul Tehran
Transasia Express ụgbọ oloko
Inbọchị taa na Jenụwarị: Jenụwarị 9, 1891 akara Adapazarı- Lefke
Oge Dijitalụ Tachograph agbatịpụrụ maka ọnwa 6